ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၏ လမ်းညွှန်ု (ရ) ချက်။
၁။ ငါတို့ ရေးဆွဲမည့် အခြေခံဥပဒေသည် တမင်းတနိုင်ငံစနစ် (Unitary System) ကို၎င်း၊ ဘုရင်စနစ် ကို၎င်း ပြဌာန်းမည့် အခြေခံ ဥပဒေ မဟုတ်။ ပြည်ထောင်စု စနစ် (Federal System) ကို ပြဌာန်း သည့် အခြခံ ဥပဒေ ဖြစ် ရမည်။ ၂။ ငါတို့ ထူထောင်မည့် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံခေါ် ဒီမိုကရေစီလူ့ဘောင်သစ် တွင် ပြည်နယ်များ သည် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းပိုင်ခွင့် (ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာ) ရှိစေရမည်။ ၃။ ပြည်နယ်များ အပါအ၀င် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအားလုံးတို့၏ အာဏာ သည် တိုင်းသူ ပြည် သားများထံမှဆင်းသက်ရမည်။ ၄။ တိုင်းသူပြည်သားမှန်သမျှ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး တို့တွင်တရားမျှတမှုရှိ စေလျက် လွတ်လပ်သော ဒီမိုကရေစိ အခွင့် အရေးများကို ဥပဒေ သက်ရောက်မှုတွင် ဆူကြုံ နိမ့်မြင့် မရှိ ပကတိ တန်းတူ ခံစားကြရမည်။ ၅။ လူနည်းစုများ အတွက် လုံလောက်သော ကာကွယ် ချက်များ ပြဌာန်းထား ရမည်။ ၆ နှင့် ရ။ တိုင်းပြည် ကာကွယ်ရေး နှင့် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး ဆိုင်ရာ လမ်းညွှန် ပြဌာန်းချက်များ။
တတိယ မြန်မာနိုင်ငံတော်ကို အလောင်းဘုရားတည်ထောင်ပြီး နှစ် ၂၀၀ ခန့်အကြာတွင် စတုတ္ထမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကို ဗိုလ်ချုပ်ဘာ့ကြောင့်တည်ဆောက်ပေးနိုင်ခဲ့သလဲ ။ အဖြေပေါင်းများစွာရှိပါတယ် အမြင်သာဆုံးအဖြေတစ်ခုမှာ ဗိုလ်ချုပ်သည် “မိမိ အကျိုးစီးပွားထက် နိုင်ငံ့အကျိုးစီးပွားကို ဦးထိပ်ထားခြင်း ” ကြောင့်ဖြစ်သည်
မြန်မာစစ်အာဏာရှင်စနစ် အရေခွံအသစ်လဲကာစ သားကောင်ဖြစ်...
နအဖ စစ်သား သေဆုံး/ဒဏ်ရာနှင့် အခြားအချက်အလက်များ (၇...
ယနေ့သတင်း (၉ ရက် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၁၁)
မြန်မာစစ်အာဏာရှင်စနစ် အရေခွံအသစ်လဲကာစ သားကောင်ဖြစ်နေကြရဆဲ မြ၀တီမြို့ခံများ (ဓာတ်ပုံသတင်း)
(၉-၂-၂၀၁၁) ညနေ မြ၀တီမြို့မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုမှာ မြေစာပင်ဖြစ်ခဲ့ရသူတွေရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေပါ
(နှလုံးရောဂါရှိသူများ၊ သွေးလန့်တတ်သူများ အောက်မှ ဓာတ်ပုံများကို ဆက်မကြည့်ပါနှင့်)
Posted by ဒေါင်းအားမာန် at 5:09 PM0comments
-၊ ၇ ရက် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၁၁
- ကမ္ဘာတ၀ှမ်းက မျိုးချစ်မြန်မာများ၏ စိတ်ပိုင်း/ရုပ်ပိုင်းထောက်ခံမှု အပြည့်အ၀ရရှိထားလ
Posted by ဒေါင်းအားမာန် at 5:05 PM0comments
၊ ၉ ရက် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၁၁
ည (၇ နာရီ) မဲဆောက် - မြ၀တီ ချစ်ကြည်ရေးတံတားအနီး ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ ဗုံးသည် မြ၀တီ ချစ်ကြည်ရေးတံတား အဆင်း လက်ဘက်ရည်ဆိုင်တွင် ပေါက်ကွဲတာဖြစ်ပါ။ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့် အရပ်သား ၇ ဦး သေဆုံးပြီး ရဲ ၄ သေဆုံး ၅ ဦး ဒဏ်ရာရရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ ပထမအလုံးပေါက်ကွဲအပြီး ဒုတိယအကြိမ် ဗုံးကို သွားရောက်ကြည့်ရှုချိန်တွင် ထပ်မံကွဲကြောင်း သိရှိရပါသည်။
Posted by ဒေါင်းအားမာန် at 5:01 PM0comments
ပြည်ထောင်စုနေ့ အကြိုဟောပြောပွဲ NLD အောင်မြင်စွာကျင်းပ
(၆၄)နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ အကြိုဟောပြောပွဲကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်မှာ ယနေ့ မွန်းလွဲ(၁)နာရီက ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင်များ နဲ့ အခြားလူငယ်များ တစ်ရာခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
သဘာတိအဖြစ် အဖွဲ့ချုပ် ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦး ကဆောင်ရွက်ပြီး CRPP အဖွဲ့ဝင် ၊ ဇိုမီအမျိုးသားကွန်ဂရက် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးပုကျင်ရှင်းထန်က ပင်လုံစာချုပ်အကြောင်း ၊ CRPP အဖွဲ့ဝင် ၊ ရှမ်းအမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ အတွင်းရေးမှုး အဖွဲ့ဝင် ဦးစိုင်းစောအောင်က ပင်လုံညီလာခံအကြောင်း ဟောပြောပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဦးဆောင်တဲ့ ဖဆပလ ညီလာခံမှသည် ၊ အောင်ဆန်းအက်တလီ စာချုပ်အပါအ၀င် ၊ ပင်လုံညီလာခံ ဖြစ်ပေါ်လာပုံ ၊ ပင်လုံစ်ိတ်ဓာတ်အကြောင်း ၊ ခွဲထွက်ရေးမဟုတ်တဲ့ ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်နဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံ ပေါ်ပေါက်ရေး ရည်မှန်းချက်များ ၊ ယနေ့ကာလ နဲ့ လျော်ညီတဲ့ ဒုတိယ ပင်လုံညီလာခံ သို့မဟုတ် (၂၁)ရာစု ပင်လုံညီလာခံပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် လိုအပ်ချက်များ ၊ အမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေး နဲ့ ပင်လုံစိတ်ဓာတ် ဆက်နွယ်နေပုံ ၊ လွတ်လပ်ရေးနဲ့ တန်းတူညီမျှရေး ၊ အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး ၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ၊ ဒီမိုကရေစီရေး ကိစ္စများကို တက်ရောက်လာကြတဲ့ တိုင်း နဲ့ ပြည်နယ် အသီးသီးမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ ၊ လူငယ်များက စိတ်ဝင်စားစွာမေးမြန်းကြတာကို ၊ သဘာပတိ ဦးတင်ဦး ၊ ဟောပြောသူ ဦးပုကျင်ရှင်းထန် နဲ့ ဦးစိုင်းစောအောင် တို့က အကျေအလည် ရှင်းလင်း ၊ ဆွေးနွေး ပြကြပါတယ်။ မွန်ပြည်နယ် ၊ဧရာဝတီတိုင်း ၊ ရခိုင်ပြည်နယ် အပါအ၀င် ရန်ကုန်တိုင်းမှ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၊ သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ် ၊ ခရမ်းမြို့နယ် ၊ သုံးခွမြို့နယ် ၊ ဗဟန်း ၊လှိုင် ၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်များမှ တက်ရောက် ဆွေးနွေးသွားကြပါတယ်။
ဟောပြောပွဲဟာ မွန်းလွဲ(၂)နာရီမှာ အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်
Posted by ဒေါင်းအားမာန် at 4:35 PM0comments
နံနက် (၁၁ နာရီ ၂၀ မိနစ်) ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက ဗိုလ်မှူးကြီး ယွက်စစ်ဦးဆောင်တဲ့ သျှမ်းပြည်တပ်မတော်(တောင်ပိုင်း)နဲ့ ဒီကေဘီအေတို့ နှစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်တွေ့ဆုံပြီး ဒီကေဘီအေကို သျှမ်းပြည်တပ်မတော်က လိုအပ်တဲ့အကူအညီ ပေးသွားမယ်လို့ သဘောတူညီချက် ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ နှစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုတော့ မပြောပဲ ထိန်ချန်ထားခဲ့ကြပါတယ်
Posted by ဒေါင်းအားမာန် at 4:32 PM0comments
ရွေးကောက်ပွဲနေ့ကစပြီး ဆန့်ကျင်ပုန်ကန်နေတဲ့ ဒီမိုကရက်တစ်ကရင်ဗုဒ္ဓဘာသာတပ်မေ
တာ် DKBA အား အပြီးသတ်နှိမ်နင်းရန် နအဖ စစ်အစိုးရအနေနှင့် စစ်ကူတပ်အင်အားများစွာကို ပို့ပေးခဲ့သော်လည်း ဒေသတွင်းရှိ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU နှင့် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF တို့၏ ထိရောက်သည့် ပူးပေါင်းစစ်ဆင်မှုကြောင့် အကျအဆုံးအထိအခိုက်များကာ မျှော်လင့်ထားသည့်အချိန် အတွင်း အောင်မြင်မှုမရရှိသဖြင့် ယခုအခါ ထိုဒေသများအတွင်းသို့ အောက်လမ်းနည်းများဖြင့် တိုက်ခိုက်ရန် စီစဉ် ဆွေးနွေးလျှက်ရှိကြောင်းသိရှိရသည်။ နအဖတွင်ရှိသည့် ယာဉ်တင်လက်နက်ကြီးများမှာလည်း သွားလာမှုအခက် အခဲကြောင့် ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်နှိုင်သဖြင့် ကရင်ပြည်နယ်ရှိ ပူးပေါင်းခံစစ်ဆင်နွှဲနေသည့် တော်လှန်ရေးဒေသအတွင်း နေရာချထားရန်အခက်အခဲဖြစ်နေသည်။ ထို့ကြောင့် နအဖအနေနှင့် အထူးဖျက်ဆီးရေးတပ် အနေနှင့်ဖွဲ့စည်းကာ တော်လှန်ရေးဒေသအတွင်းရှိ ပြည်သူလူထုအပါအ၀င် တော်လှန်ရေးအဖွဲ့သားများ ခြေမချနှိုင်စေရန် ဇိဝလက်နက်ကဲ့သို့သော လက်နက်များအသုံးပြုဖြိုခွင်းရေးပြင်ဆင်ဆွေးနွေးလျှက်ရှိကြောင်းသိရှိရသည်။ ထိုအစီအစဉ်တွင် တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များ နေထိုင်သည့် ဒေသအတွင်းရှိ အသုံးပြုလျှက်ရှိသည့် ချောင်းမြောင်းများအတွင်း အဆိပ်ခတ်ရန်အထိပါဝင်ကြောင်းသိရှိရသည်။ ဗမာနိုင်ငံတွင် န၀တ နအဖ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး စတင်သည့် ၁၉၈၈ မှစ၍ ကျန်းမာရေးအကြောင်းပြချက်ဖြင့် နိုင်ငံတကာမှ တရားဝင် ဇိဝပစ္စည်းများအား သွင်းယူစမ်းသပ်နေသည်မှာ ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်သကဲ့သို့ မာနယ်ပလောစစ်ဆင်ရေးနောက်ဆက်တွဲ ၀မ်ခစစ်ဒေသများကို ထိုးစစ်ဆင်ရာတွင် နအဖ အနေနှင့် အဆိုပါ ဇီဝလက်နက်များကို အသုံးပြုသွားကြောင်း အထောက်အထားရှိခဲ့သည်။
ဒုဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမောင်အေးအား အရပ်ဘက်သို့တိုက်တွန်းပို့ဆောင်ရေးကြိုးပမ်းနေစဉ် ဒုဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမောင်အေးအနေနှင့် လက်မခံနှိုင်ဘဲ တပ်မတော်ရာထူးမှနှုတ်ထွက်သွားသည်ဟု မိမိတို့သတင်းအဆက်အသွယ်များထံမှ သိရှိရသည်။
Posted by ဒေါင်းအားမာန် at 7:25 PM0comments
ပန်းဆိုးတန်းသို့ဖြတ်သန်းခြင်း
အလွမ်းတွေနဲ့မှိုင်းမှိုင်းဝေနေတဲ့ 
လွယ်အိတ်ထဲက ထုတ်ခင်းလိုက်တယ် ….
အေမီ ဒေစီ ကေသီ
စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ဈေးဦးမှပေါက်ပါ့မလား
အရင်အတိုင်းပဲ အပြုံးများ နွမ်းလျ
အိမ်ပြန်ခက်တဲ့ ညတွေကြုံဦးမယ် ….
ငါ့ ရင်ကို ချေမွနေတယ်
ငါ မမြင်ဘူးသော မျက်နှာစိမ်းများ
ပန်ကာအောက်မှာ ထိုင်နေသည် …..
အဟောင်းဆိုင်ကလေးရဲ့စာအုပ်ပုံကြား
ဖူးချစ်ရဲ့ကြိုးစင်ပေါ်က မှတ်စု
ငါ့ နှလုံးသားကို တူနဲ့ ထုလေတယ် ….
သောကစွန်းထင်း ပေကျံနေသော မျက်ဝန်းများကို
ခပ်ယဲ့ယဲ့ ပြုံးပြ နှုတ်ဆက်ထွက်ခွါ
ဖူးချစ်က သင်တို့ ကို ချစ်ခဲ့သည်
ငါ့ အာရုံမှာ ငြိတွယ်လိုက်ပါ …..
ငါ မြင်ဘူးတဲ့ သူတွေနဲ့ 
ငါ စီးးဘူးတဲ့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်လက်ကျန်ကားများ
တိုးဝှေ့ဖြတ်သန်း
ငါ့ ၀ိညာဉ်ဟာ အခိုးအငွေ့ အဖြစ်
၂၆ ၀၁ ၂၀၁၁
Posted by ဒေါင်းအားမာန် at 7:21 PM0comments
“ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပြည်သူ့အားလုံးနှင့်အတူ ကျနော်တို့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များက လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါသည်။
မှန်ကန်သောသတင်းသိရှိရေး စစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေး ဒီမိုကရေးစီနှင့်လူ့အခွင့်အရေးရရှိရေး ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး စစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်ပြည်တောင်စုတညိထောင်ရေး အရပ်သားအစိုးရပေါ်ထွန်းရေး ပါတီစုံစနစ်ကျင့်သုံးရေး
Football, GNUFCASINO, BINGO ONLINE, video slots, poker
©2009 သမိုင်းမှတ်တမ်း(ခ)အမှန်တရား၏မြစ်ဖျားFree Wordpress Themes and Free Blogger Templates by TNB Popularized by Watch Tv Shows Online. Unblock through myspace proxy unblock, Songs by Christian Song Chords